Indlela ukushintsha iphrinta igobolondo: igxathu negxathu Umhlahlandlela
umnikazi Ngamunye iphrinta uzama ukufunda indlela ukushintsha igobolondo iphrinta. Ngokuvamile, kwenzeka ukuthi emva kokuthenga uyinki iphrinta siphela ngokushesha okukhulu. Lokhu kwenzeka ngoba uma uthenge le divayisi ke ufakwa a igobolondo demo ngezisetshenziswa kancane kakhulu. Ngakho-ke kufaneleke ukuba uzibuze umbuzo kanjani ukushintsha igobolondo kwiphrinta, pre-usigcwalisa upende. Noma ingabe kangcono ukuthenga entsha?
Njengoba ezothatha isikhundla noma refilling?
Akukho ingxabano, kuba lula kakhulu ukuthenga igobolondo entsha. Sathola ubudala, ziyalahlwa, sibeka entsha futhi kwenziwe ngayo. Kodwa ngakho-ke kwenzeka ukuthi cartridges entsha ibiza kakhulu amaphrinta ngokwabo (ngokuvamile konke okwenzeka nge amaphrinta ezishibhile). Lokhu kwenziwa yizimboni ngqo abantu achithe imali eningi okudlekayo, kanjalo ukhulisa inzuzo yezinkampani yokukhiqiza. Kuyadingeka ukuba ukhumbule ngaphambi ukushintsha igobolondo kwiphrinta. HP Deskjet (iphrinta yakho), isibonelo, ngeke ukhokhe imali eshisiwe uma njalo ukuthenga cartridges entsha. HP Inkampani uthola izimali zalo ngokuyinhloko kusukela ukudayiswa cartridges.
Futhi esinye isaziso, ngaphambi iphrinta ukushintsha igobolondo inki noma gcwalisa, uqiniseke ukuthi kungenzeka ukwenza. Yiqiniso, ukushintsha njalo kungenzeka, kodwa ukugcwalisa - akukho. Konke kuncike uhlobo iphrinta kanye igobolondo uqobo.
Yomiselela inki cartridges
Kodwana ezivamile kuyinto iphrinta inkjet ngezindleko eziphansi ngoba uyakwazi ukuphrinta umbala izithombe.
abakhiqizi Iphrinta benza konke okusemandleni ukuze kuqinisekiswe ukuthi umsebenzisi uyazi ukuthi igobolondo iphrinta washintsha. Kukhona ngisho kungekho ziqondiso, konke aphansi elula: ukuvula lid, wakhipha igobolondo ezingenalutho, wafaka elinye. Yilokho lonke inqubo. Onjiniyela uzama ngamabomu lula inqubo kokufaka inki cartridges entsha, ngakho izinkinga obhekana nje ngeke. Kodwa lokhu kuphela uma ufuna ukufaka esikhundleni igobolondo ubudala ngentsha. It kuyodingeka ukuthenga i igobolondo ezibizayo. Kodwa kukhona okunye okukhethwa kukho. Njengoba wazi, sikhuluma esiteshini gas.
Lapho abantu bebona lezi amaphrinta esitolo, bavame ukuwa, nina wobuqili eziphansi, futhi kuphela ngalesosikhathi realize ukuthi isevisi kuyinto ezishibhile umbala iphrinta kuyoba ezibizayo. Kodwa wazi ukuthi ukushintsha igobolondo e iphrinta ngemva refilling, kodwa ungase wonge imali, futhi eziningi.
Into yokuqala kakhulu - udinga ukuthenga inki igobolondo ezinhle. Uma unquma wonge imali bese ukhetha upende ezimbi, ikhwalithi isithombe kuyoba abampofu. Enye ingqinamba ka eliphansi inki - omiswe okusheshayo kanye nokuntuleka ukuphrinta kwezinye izindawo ephepheni.
Kuyaphawuleka ukuthi Abenzi cartridges neze ubavumele ukupenda kanye kits esikhethekile refueling. Bafuna abantu ukuthenga kubo cartridges amanye. Ngakho ungazami ukuthola inki yasekuqaleni, okuyinto nje hhayi yendalo.
Ngakho usuthenge inki. Ukuze ukugcwaliswa udinga isipetu. Susa lo igobolondo kusukela iphrinta, thola isitsha sakhe, nigcwalise isipetu ngoyinki ukuze amandla oluhambisana nomthamo igobolondo. ine umgodi (ke ethe njo isitikha) ku ukuphela phezulu igobolondo, lapho emoyeni ngokulambisa. It has usayizi encane kakhulu, kodwa inaliti isipetu zizongena.
Ungazama Dabula lesi-sticker, kodwa ngemva kokugcwalisa bethela emuva. Kukhona luyasetshenziswa kwakha isimiso esiyinkimbinkimbi umoya uphuma khona, futhi isitikha kuyingxenye zalesi simiso. Uma kungukuthi ethe njo ilebula, uyinki ngeke egeleza umlomo wombhobho igobolondo.
Kunenye refueling inketho. Sokuprakthiza thinnest wenze imbobo igobolondo, ezigcwele inki, bese ngokucophelela ukuvala umgodi plasticine. Ungasebenzisa ngisho gum abavamile. Zonke umsebenzi kumelwe kube njalo, kodwa kuphela uma Ziningi ukuthayipha. Uma ukupenda uDries ke ukuhlanza igobolondo ngeke aphumelele.
Yize kunjalo, uma uzitholele okuningi, awudingi ukuba usuyakwazi ukushintsha igobolondo e HP imodeli iphrinta noma kwenye umakhi. Ngempela, kulesi simo kuyafaneleka ukusebenzisa CISS, okuzokwenza ugcine isikhathi nemali ngaleso futha igesi.
Ukukhishwa gcwalisa cartridges
Njengoba kunjalo nge igobolondo jet iphrinta laser futhi kulula ukususa: ukuvula phambi (phezulu noma ngemuva) isivalo, cindezela isiqhebezo ekhethekile bavale igobolondo uqobo. Kuye imodeli, igobolondo angasuswa ngezindlela ezahlukene, kodwa ngaso sonke isikhathi enza kube lula. Ngo ezinhle, kudingeka baphonse esetshenziswa igobolondo bese ufaka entsha, kodwa kungcono umane ukugcwalisa.
Vele uqaphele ukuthi gcwalisa laser printer cartridges kunzima futhi okungenamsoco. ngokugcwalisa powder ayijulile kakhulu, futhi uma lingena emaphashini, kuyoba kubi. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba ushintsho igobolondo iphrinta refilling wokulungiselela, kubalulekile ukuba sithathe izinyathelo zokuphepha. Okokuqala, udinga ngendwangu noma ngomshini ukuze Procrit umlomo nekhala. Futhi nakuba upende ngeke ukuvikela ngisho imaskhi igesi impi, ingabe kufanele yenziwe yini. Njengoba amaphaphu ungase uthole kuphela ingxenye encane uthuli. Okwesibili, kudingeka ifake uphethiloli kuphela endaweni kahle umoya.
Inqubo ukugcwaliswa futhi esikhundleni
Ngakho, steles ephepheni phezu kwetafula futhi phansi, futhi uqhubeke. Susa lo igobolondo ubudala, uyibuke ukhokho okuyothi toner ugcwele. Lesi sijobelelo itholakala emva omunye ohlangothini izembozo. Kulula ukususa - umane uyasikrufulula a nezikulufi ambalwa. Susa i-plug futhi sigcwalisa banal phakathi toner. Lokho kwenze ngobumnene futhi ugweme sishaye yonkana ekamelweni.
Uma i-plug Ngibambeni wayengenandaba nawo, ngakho-ke kuba kakhulu isakhiwo igobolondo. Ukuze uligcwalise, kubalulekile yini ukudalula lolu ngokuphelele nigcwalise toner ku ufa. Kulokhu, ukugcwaliswa luyindida kakhulu. Ngakho-ke, lapho sikhetha iphrinta laser udinga ukucacisa onjani igobolondo isetshenziswa ngaphakathi.
Kukhona futhi cartridges chipovanye ukuthi ngemva ukugcwaliswa kungenzeka umane zingasebenzi. Ekhaya, lezi onobuhle, ngeke bakwazi ukugcwalisa. Nokho, amasevisi ekhethekile, futhi amanye chips zabo esimnandi entsha, okuyinto ziqondakala iphrinta. Lokhu kungase kube nobunzima ezengeziwe. Ngakho-ke, ngaphambi ukushintsha igobolondo kwiphrinta noma gcwalisa ngayo toner, hlola ukuthi i-chip lisebenzisa. Uma esikhundleni igobolondo yoqobo chip ku unoriginal ke ukusebenza ke nje ngeke.
Manje wazi kanjani ukuthi ukushintsha igobolondo kwiphrinta, Canon kanye nezinye brand, ngakho uzokwazi ukukwenza.
CPU LGA775: Ukucaciswa, ukuhlolwa kanye nokubuyekeza amakhasimende
NVIDIA GeForce GTX 480: Ukucaciswa, ukubuyekezwa, ukubuyekeza
Indlela ukwandisa isivinini imodemu kuya efiselekayo?
Izinsiza ze-Xbox 360: Sibutsetelo kumadivayisi adumile
Kanjani ikhibhodi Chinese?
Izibuyekezo mayelana show, "Mnu Robot ': incazelo, ukubuyekezwa kanye nabalingisi
Ingabe zingafezeki amaphupho "Apal-2154"?
Ungayithola kanjani ukuvimba umyalo eMinecraft nokuthi ungayisebenzisa kanjani?
SS: isithombe, ukuma, uphawu, ukhanda ngemva kwempi. SS - ke ...
Yokufuna Iwusizo engadini - Izambane ngoba motoblock
Ukudla yogurt ikhukhamba - indlela enhle kakhulu ulwe ukukhuluphala
Cavitation - Cavitation kuyinto ...: ukubuyekezwa, ukusebenza kahle, intengo
"Scrap Akunamsebenzi lephepha": ukubaluleka iyunithi phraseological, umsuka, ukusetshenziswa isimo
Obolonska Quay Kyïv - ekhoneni fabulously enhle wadala babe ngumsebenzi wezandla zomuntu
Mik Dzhagger (Mick Jagger): Umlando kanye umsebenzi umculi